Warshadda GMP - Fuqing King Dnarmsa Spirulina Co., Ltd.
Aqoon-isweydaarsiga Shahaadada ee GMP
Laga soo bilaabo 2005, King Dnarmsa wuxuu si isdaba joog ah u aasaasay aqoon isweydaarsiyo cunto caafimaad, aqoon isweydaarsiyo GMP, aqoon isweydaarsiyo cabitaan adag/dareere ah iyo aqoon isweydaarsiyo wax soo saar ee Fuzhou iyo Danzhou si loo barto iskuxir kasta oo geedi socodka laga bilaabo alaabta ceeriin ilaa alaabada la dhammeeyay. King Dnarmsa wuxuu leeyahay aqoon isweydaarsiyo wax soo saar oo casri ah oo leh hawo nadiifin ilaa fasalka 100,000 oo buuxiya heerarka GMP. Waxay dhaaftay ISO9001: 2015, HACCP, BRC, shahaadooyinka GMP iyo diiwaangelinta FDA ee Mareykanka.
Waxyaabaha Spirulina, Chlorella waxay helaan shahaadooyinka cuntada xalaasha ah ee HALAL, cunnada Yuhuudda ee Kosher, badeecooyinka dabiiciga ah ee EU -da, iyo alaabta dabiiciga ah ee NOP, kuwaas oo hubiya badbaadada cuntada laga bilaabo beerta ilaa miiska. -jebinta darbiga, ultramicro-pulverization, kaabsoosha adag, softgels, budo iyo dhagxaanta.
King Dnarmsa wuxuu leeyahay 2,000 mitir oo laba jibbaaran oo aqoon isweydaarsi qoto dheer oo algae ah Fuqing, gobolka Fujian. Waxaa loo dhisay si waafaqsan aqoon -isweydaarsiga caadiga ah ee GMP, wuxuuna ka gudbay shahaadada aqoon -isweydaarsiga cuntada GMP ee caafimaadka, si loogu hawlgalo Spirulina iyo Chlorella.
Soo -saarista Aqoon -isweydaarsi
King Dnarmsa wuxuu leeyahay 1,000 mitir oo laba jibbaaran oo ah aqoon -isweydaarsiga Blue spirulina (phycocyanin) ee gobolka Hainan kaas oo loo dhisay si waafaqsan aqoon -isweydaarsiga caadiga ah ee GMP. Soosaarka sanadlaha ah ee budada phycocyanin waa 30 tan.